Cabbiraadku wuxuu soo jeedinayaa 3 Talaabo oo sahlan si uu u xareeyo Content Content
Haddii aad rabto inaad xogta ka qaadato bogaga internetka, goobaha warbaahinta bulshada, iyo shakhsiga blogs, waa inaad barataa luqadaha barnaamijyada sida C ++ iyo Python. Dhawaan, waxaanu aragnay kiisaska nacaybka oo si fiican looga yaqaan internetka, kiisaska intooda badani waxay ku lug lahaayeen nuxurka qalabkii . Isticmaalayaasha Windows iyo Linux, tiro badan oo ah websumayn ayaa loo sameeyay horumarinta shaqadooda ilaa xad. Dadka qaarkood, si kastaba ha ahaatee, waxay doorbidaan naqshadaynta manfacyada, laakiin waa waqti wakhti go'an.
Halkan waxaan ka wada hadalnay 3 tallaabooyin sahlan oo lagu xoqayo nuxurka bogga in ka yar 60 ilbidhiqsi.
Dhamaan isticmaalaha xaasidnimo waa inuu sameeyo:
1. Helitaanka qalabka interneetka ah:
Waxaad isku dayi kartaa barnaamijka shabakada internetka ee shabakada caanka ah sida Extracty, Import. io, iyo Portia by Scrapinghub. Soo dejinta. Io ayaa sheegatay in ay xoqdo 4 milyan oo bog internet ah oo ku saabsan internetka. Waxay bixin kartaa xog wax ku ool ah oo macna leh, waxayna faa'iido u leedahay dhammaan ganacsiyada, laga bilaabo bilowga shirkadaha waaweyn iyo magac caan ah. Intaa waxaa dheer, qalabkani waa mid aad u weyn oo loogu talagalay barayaasha madaxa banaan, ururada samafalka, suxufiyiinta, iyo barnaamijyadaba. Soo dejinta. Io waxaa loo yaqaanaa in la keeno SaaS waxsoosaarka noo suurta gelisa in aan u bedelno nuxurka webka si loo helo akhbaar iyo macluumaad wanaagsan. Tiknooloojiyada barashada mashiinka waxay ka dhigtaa soo dejinta. iyo doorasho hore ee labada codsadayaasha iyo kuwa aan codka lahayn.
Dhinaca kale, Extracty wuxuu u beddelaa xogta internetka xogta waxtarka leh iyada oo aan loo baahnayn xeerarka. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad kiciso kumanaan URL oo isku xiga ama jadwalka. Waxaad heli kartaa boqollaal ilaa kun oo xog ah oo la isticmaalayo Extract. Barnaamijkan daabacaadda shabakada wuxuu ka dhigayaa shaqadaada si sahlan oo dhakhso badanna wuxuu ku shaqeynayaa nidaamka dariiqa.
Portia by Scrapinghub ayaa weli ah aalad kale oo cajiib ah oo ah shabakad khafiifinaysa shaqadaada oo sahlan oo kuu soo saara macluumaadka hababka aad rabto. Portia wuxuu noo ogolaanayaa in aan ururino macluumaadka laga helo bogagyo kala duwan oo uma baahnid wax barnaamij ah barnaamijka. Waxaad sameyn kartaa template adiga oo gujinaya waxyaabaha ama bogagga aad jeclaan lahayd in la soo saaro, iyo Portia waxay abuuri doontaa caaro aan soo saari doonin oo kaliya xogtaada laakiin sidoo kale raadin doona boggaaga internetka.
2. Ku qor URL ee tartanka:
Marka aad dooratid adeegga adeegga duubista ee loo baahan yahay, tallaabada xigta waa inaad gashid URL-kaaga tartameedka oo aad bilawdo jeexjeexahaaga. Qaar ka mid ah qalabkaan waxay ku xoqin doonaan boggaaga oo dhan bogga labo wiqiyadood, halka kuwa kale ay qayb ahaan u soo saari doonaan nuxur ahaan.
3. Soo saar waraaqahaaga la xoqay:
Marka xogta la rabo la helo, talaabada ugu dambeysa waa in la dhoofiyo xogtaada la xoqay. Waxaa jira siyaabo aad u dhoofin kartid xogta la soo saaray. Su'aalaha sawirrada webka waxay abuurayaan macluumaad qaababka jaantusyada, liisaska, iyo naqshadaha, waxay u sahlaysaa isticmaalayaasha inay soo dejiyaan ama dhoofaan faylasha la rabo. Labo nooc oo ugu gargaara waa CSV iyo JSON. Ku dhowaad dhammaan adeegyadda xoqidda waxtarka waxay taageeraan qaababkan. Waxaa suurtagal ah in aan kobcinno xoqdo oo aan ku kaydino xogta adigoo dejinaya faylka iyo xulashada qaabka la doonayo. Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa xulashada Maalka Khadka Gadashada ee soo dejinta. io, Extracty iyo Portia si ay u dejiyaan wax soo saarka dhuunta iyo helitaanka CSV-yada iyo faylasha JSON inta lagu jiro burburinta Source .